जब महानिर्देशक, कार्यक्रम अवधिभर सहभागीकै रुपमा बसे - Wash Khabar
३१ असार २०७६, मंगलवार ०८:४९
काठमाडौ : कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिलाई पर्खिदा पर्खिदा अधिकांश सरकारी कार्यक्रमहरु समयमै सञ्चालन हुँदैनन् । कार्यक्रममा ढिला गरी उपस्थित हुने अनि तिनै अतिथि अन्य ठाउँमा पनि कार्यक्रम भ्याउनुछ भन्दै बीचैमा निस्केर हिडेका कतिपय कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनु भएकै होला ? यस्ता देख्दै र व्यहोर्दै आएका तपाई हाम्रा लागि कार्यक्रममा ढिला उपस्थित हुने, मञ्चमा बसेर कानेखुसी गर्ने, बोल्न पायो भन्दैमा प्वाक्क बोलेर त्यसको जवाफ नै नसुनी कार्यक्रम छोडेर बीचैमा हिडिदिने कुरा कुन नौलो कुरा भयो र ? कतिपय कार्यक्रमहरु मध्यान्तरमा प्रमुख अतिथि आएपछि मात्र उदघाटन गरिएका पनि छन् ।
कार्यक्रम आयोजकले आतिथ्यता दिन लायक भनेर बोलाएका व्यक्ति ढिला कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा पनि कुनै लज्जा बोध गर्दैनन् । मेरा कारणले कार्यक्रम ढिला हुन गयो, सहभागीले म प्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बनाउँलान् ? मेरा कारणले अरुले दुःख पो पायो कि ? यस्ता कुराको कुनै हेक्का राख्दैनन् । बरु अन्तै जानुछ भन्दै पालो मिचेर मन्तव्य राखेर कार्यक्रमबाट निस्किहाल्छन् ।
सोमबार ललितपुरमा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला तयारीका लागि परामर्श कार्यक्रम हुँदै थियो । तर उक्त कार्यक्रममा तपाई हामीले देख्दै र भोग्दै आएका विगतका कार्यक्रमहरु भन्दा फरक दृश्य देखिन्थ्यो । अन्य सहभागी सँगै कार्यक्रमको सुरुमै आईपुग्नु भएको थियो, राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्र बहादुर केसी र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुनिल कुमार दास पनि ।
अन्य कार्यक्रममा जस्तो अतिथिहरुका लागि बस्ने छुट्टै मञ्चको व्यवस्था थिएन । कार्यक्रम सञ्चालकले पनि उहाँहरुलाई अतिथि भनेर सम्बोधन नगरी आसन ग्रहणका लागि मात्र आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका अन्य सहभागी जस्तै राउण्ड टेबलमा बस्नुभयो महानिर्देशक दास र सहसचिव केसी ।
उहाँहरु दुवै जना राउण्ड टेबलमा बस्नु मात्र भएन, अन्य सहभागीले झैं कार्यक्रमको हरेक क्रियाकलापमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुभयो । परिचय दिनुभयो, मेटा कार्डमा लेखेर आफ्नो बिचार व्यक्त गर्नुभयो, अन्तरक्रियाका क्रममा उठेका बिषयबस्तु उपर आफ्नो मत जाहेर गर्नुभयो ।
बिहान ९ बजेदेखि साँझ साढे पाँच बजेसम्मको लामो कार्यक्रममा बरु बीच बीचमा अन्य सहभागी बाहिर निस्के तर महानिर्देशक दासले अधिकांश समय छलफलमा भाग लिएरै बिताउनुभयो ।
महानिर्देशक दासले देखाउनुभएको कार्यक्रम प्रतिको लगावले देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न उहाँ कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ । एक दिन अगाडि मात्र महानिर्देशक दासको संयोजकत्वमा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न मूल समिति गठन गरिएको थियो । यसले पनि उहाँलाई थप कर्तव्य बोध गराएको हुनुपर्छ ।
पूर्ण सरसफाइको सूचक सम्बन्धी विभिन्न चरणमा दिनैभर छलफल भएपछि आगामी कार्तिक भित्र पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने र पूर्ण सरसफाइ मागदर्शन २०७३ को संशोधनका लागि यस अघिका सूचकहरुको पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै महानिर्देशक दासले आफूलाई यो कार्यक्रमले कतिपय कुरा स्पष्ट हुने अवसर प्रदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने मिति धेरै पटक तोकिसके पनि यसपटक भने देश खुला दिसामुक्त घोषणा भएरै छाड्ने बताउनुभयो ।
‘खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न हामी सबै सरोकारवालाहरु मिलेर अन्तिम धक्का दिऔं, अन्तिम बल लगाऔं, यो हाम्रो सबैको उपलब्धी हुनेछ’ उहाँले सबैलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न वास सेक्टरको योगदान ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले बनाउन बाँकी चर्पीहरु बनाऔं र ओडिएफ घोषणा गर्न बाँकी जिल्लालाई चाँडै खुला दिसामुक्त घोषणा गरौं ।’